Ross Video wuxuu ka dhigayaa Nambarka iibinta lix iyo toban - Video Sawir ah | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Ross Video wuxuu ka dhigayaa Lambarka Qaadashada lix iyo toban - Video Sawir
Ross Video waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo helitaanka Muuqaalka Sawirka ee fadhigiisu yahay Toronto. Muuqaalka Muuqaalka waxaa la aasaasay 1974 - isla sanadkaas Ross - isla markaana waxaa si fiican loogu yaqaanaa barnaamijkeeda TSI ee xakameynta, oo ay adeegsadaan bixiyeyaasha shabakadaha waaweyn ee baahinta, goobaha isboortiga, tas-hiilaadka fiidiyowga shirkadaha iyo guryaha cibaadada. Iibinta in ka badan sagaal iyo labaatan dal, saldhig macmiil oo la yaab leh iyo boqolaal hab maamuusyo qalab ah oo taageera (oo ka bilaabma isku xirnaanta taxanaha dhaxalka illaa shaqooyinkii ugu dambeeyay ee ST2110), barnaamijka TSI wuxuu sii wadaa inuu hogaamiye ka noqdo fasalka wax soo saarka Tally iyo UMD.
La wareegitaankan - Ross VideoLix iyo tobnaad tan iyo 2009 - wuxuu arki doonaa kooxda muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka oo ay hogaaminayaan Zach Wilkie iyo David Russell, oo ay weheliyaan R&D iyo kooxaha taageerada farsamada oo dhan u wareegaya Ross. Zach Wilkie hadda Maareeyaha Wax soo saarka, Ross Tally Systems, wuxuu ku faraxsan yahay rajada nolosha oo qayb ka ah Ross Video. “Shirkad kale oo Canadian ah oo la aasaasay isla sanadkaas, waxaan iska bar-baarnay inaan isla barbar kornay Ross Video waana aragnay koritaanka cajiibka ah iyo balaarinta ganacsiga Ross, gaar ahaan tobankii sano ee lasoo dhaafay. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kamid noqono qoyska wax soo iibsiguna wuxuu naga caawin doonaa inaan gaarno suuqyo caalami ah oo cusub iyo inaan sifiican wax u kordhino. ”
David Ross, Agaasimaha Guud, wuxuu ka tarjumayaa muhiimadda shaqsiyadeed ee helitaanka. Sannadkii 1973-kii, aabbahay wuxuu ku jiray cisbitaalka ka dib markii uu lug ka jabay. Jim Leitch, aasaasihii Leitch Video (hadda Bal qiyaas Communications) booqday oo kula taliyay aabbahay inuu furo shirkad isaga u gaar ah. Wuxuu yiri waxaa jiray Leitch Video iyo Sawir Muuqaal ah oo Kanada ah, marka sidoo kale waa inuu jiraa Ross Video. Waa suurtagal in haddii Muuqaalka Muuqaalka uusan jirin, aabbahay waxaa laga yaabaa inuusan lahayn tusaalayaal noocan oo kale ah si uu u muujiyo jidka, iyo xitaa haddii Aabbe uu billaabo shirkadeena, waxaa suuragal ah inaan nala magacaabin. Ross Video maanta! Sanadahan oo dhan kadib, Sawirka hadda waa qeyb ka mid ah Ross, wax aabbahay ku raacsan yahay waa wax la yaab leh. Tally platform-ka muuqaalka ee Image-ka ayaa si weyn u dhameystiraya xalalkeena jira isla markaana u saamaxaya Ross inuu xitaa keensado xulasho dheeraad ah suuqa wax soo saarka nool.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Ross Tally Systems, fadlan riix halkan.
Ross Video - Saamayn Sare, Wax-soosaar Wax-ku-ool ah oo Sare
Ross awoodaha wax soosaarka fiidiyowga ee tooska ah loogu talagalay balaayiin daawadayaal caalami ah maalin kasta oo leh tirade ugu ballaaran ee warshadaha saameyn sare, waxtarka sare xalka iyo adeegyada. Ross wuxuu ufududeeyaa abuuritaanka warar soo jiidasho leh, cimilo iyo isboorti bixinta, ka qayb qaadashada waxyaabaha loogu talagalay shaashadaha isboortiga, riwaayadaha madadaalada iyo riwaayadaha dhagaxa, xarumaha waxbarashada, golayaasha sharci dejinta, bandhigyada shirkadaha iyo waxyaabo dhiirigelin leh guryaha cibaadada.
Solutions Ross waxay ku riyaaqday dadka dhagaystayaasha iyo wada-hawlgalayaasha suuq-geynta Eurosport, BBC World, SKY, Google YouTube Space London, iyo caalamiga soo dejiya quwadda korontada ESL. Ross wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo badeecooyin iyo adeegyo isugu jira kamarado, sawirada dhaqdhaqaaqa waqtiga-dhabta ah, soo-beddelayaasha wax soo saarka, nidaamyada kamaradaha aaladaha, runta / istuudiyaha dalwaddii la kordhiyay, fiidiyeyaasha fiidiyowga, kaabayaasha iyo router, maareynta warbaahinta bulshada, nidaamyada qolka wararka iyo adeegyada soosaarka dhacdooyinka tooska ah.
Previous: Velocix waxay soo bandhigeysaa xayeysiinta fiidiyowga u dhashay daruuriga iyo asalka shaqsiyaadka durdurinta
Next: Sawirada Pace Waxay U Isticmaashaa Naqshadeynta Blackmagic si loo Xadgudbo Khadadka u dhexeeya Soosaarka iyo Boostada